Musiyano Huru Pakati peKwayedza Enanthate uye Test Propionate
Pano tichasangana zvose Testosterone Propionate (CAS 57-85-2) uye Testosterone Enanthate (CAS 315-37-7). Nyaya iyi ichazarura pfungwa dzako uye ichakubatsira pakufananidza Testosterone Enanthate kubatsira uye Testosterone Propionate inobatsira. Uyezve, kana iwe uchida kuverenga chaiye Test Test e vs Test Prop kutarisa, ipapo iyi ndiyo nzvimbo inofanira kuva. Hapana chikonzero chekuedza nzira nekukanganisa apo iwe uchida kutenga Testosterone En ...
Zvose pamusoro peSustanon 250 1.Chii Sustanon 250? 2. Sustanon 250 Inoshandisa 3.Sustanon 250 Nhamba 4.Sustanon 250 Purogiramu 5.Sustanon 250 mhinduro 6.Sustanon 250 yehafu yeupenyu 7.Sustanon 250 mazano 8.Sustanon 250 mazano 9.Sustanon 250 inotengeswa 10.Sustanon yekuvaka muviri-inoreva 1. Chii chinonzi Sustanon 250? Sustanon 250 imwe ye steroid iyo inonyanya kufarirwa uye ino ...
Zvose pamusoro peStanzolo (Winstrol) 1.Chii Stanozolol? 2. Stanozolol inoshanda sei? 3.Stanozolol inoshandisa 4.Stanozolol muyero 5.Kutora sei Stanozolol 6. Ndiani asingafaniri kutora Stanozolol? 7.Stanozolol cycle 8.Stanozolol migumisiro 9.Stanozolol hafu yeupenyu 10.Stanozolol dzinobatsira 11.Stanozolol mazano 12.Stanozolol anotengesa 13.Stanozolol yekuvaka muviri - (summary) ...